जगुआर फ्यूचर-टाईप, यो कम्पनीले २०2040० को कार देख्दछ ग्याजेट समाचार
जगुआर फ्यूचर-टाईप, कम्पनीले यो देख्छ कि २०2040० को कारहरू
हामीले भर्खरै प्रयोगको बारेमा सिक्यौं जुन जगुआर कारको भित्री भागको सब भन्दा आवश्यक भागहरू मध्ये एकलाई दिन चाहन्थ्योः स्टेरि .् व्हील। उसको विचार सायर अवधारणामा सन्निहित थियो,aस्मार्ट स्टीयरिंग व्हील que प्रयोगकर्ताको साथ उनीहरूको सबै यात्राहरूमा एक स्वायत्त वाहनमा जानुहोस्.
तर यहाँ सबै कुरा छैन। र जगुआरले अगाडि जान्छ, साथै सर्वसाधारणलाई भविष्यको सवारी साधनहरू कसरी हुने भनेर सिकाउनेमा पनि बेजी गर्दछ। अधिक विशेष रूपमा वर्ष २०2040०, लगभग केहि पनि छैन। यस परियोजना को नाम हो जगुआर भविष्य - प्रकार, दुई व्यक्ति भित्र समायोजित गर्न सक्छन् कि एक वाहन। यद्यपि तिनीहरूको स्थिति सामना हुनेछ; अर्को शब्दहरुमा, यो अधिक से अधिक ध्यान लिनेछ कि मानिसहरु एक अर्का संग कुराकानी छ।
मर्सिडीज बेन्ज र यसको स्वायत्त स्मार्टको साथ स्मार्ट दृष्टि EQ फोर्टो, यी कारहरूको भित्री तिनीहरूको फीस स्टीयरिंग व्हीलहरू वा ड्राइभि ped प्याडल जस्ता तत्वहरूको उन्मूलनको लागि धन्यवाद वृद्धि हुनेछ। यद्यपि, जगुआरको सन्दर्भमा, साइर स्मार्ट स्टेयरिंग व्हीलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ: यो सडकमा हाम्रो सहायक हुनेछ। थप रूपमा, सबै स्वायत्त वाहनहरूको नेटवर्कमा सम्बन्धित हुनेछ carsharing Ha सेयर गरिएको वाहनहरू — ताकि प्रयोगकर्तासँग उसको स्वामित्वमा कुनै कार हुनेछैन; केवल अंश त्यो कि उसको स्वामित्वमा रहनेछ सायरको विशिष्ट एकाई हुनेछ।
थप रूपमा, जगुआर फ्यूचर-टाईप पनि कहिलेकाँही मानव-चालित हुन सक्छ, यद्यपि जगुआरले यस विषयमा धेरै विवरण प्रदान गरेको छैन। साथै, यो कार, को नेटवर्कसँग सम्बन्धित छ carsharing, सवारी को पुरानो सिधा सम्बन्ध मा हुनेछ। यसबाट के प्राप्त हुनेछ? ठिक छ, तिनीहरू आपसमा जानकारी साटासाट गर्न र कार्टहरूलाई अझ दक्ष वातावरण र सबै भन्दा माथि, मान्छेहरूको लागि सुरक्षित बनाउन सक्छन्।
अब, हामी सबैले यस प्रश्नमा आफैलाई सोध्न सक्ने प्रश्न हो: के समाज कुनै गाडीको स्वामित्वमा राख्न राजी छैन? के तपाईं आफूले नचिनेका मानिसहरूसँग दैनिक यात्राहरूमा कार बाँड्न इच्छुक हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » जगुआर फ्यूचर-टाईप, कम्पनीले यो देख्छ कि २०2040० को कारहरू
एन्डी रुबिनको आवश्यक मर्मत गर्न लगभग असम्भव छ
कसरी कसैको आईपी पत्ता लगाउने